Waa Warshada Wax Soo Saarka- Kadib Heshiiska Cheslea Ee Hakim Ziyech, Akhriso Lacagta Layaabka Leh Ee Ay Ajax Kooxaha Yurub Ka Heshay. - Gool24.Net
Kooxda Ajax ayaa ogolaatay in xidiga kooxdeeda ee Hakim Ziyech uu dhamaadka xili ciyaareedkan si rasmi ah ugu biiri doono Chelsea, wuxuuna ku biiray liiska ciyaartoyda ugu qaalisan ee ay kooxda reer Holland lacagaha badan kaga heshay kooxaha Yurub.
Ajax waxay ka mid tahay kooxaha Yurub ee ciyaartoyda ugu badan soo saaray isla markaana hibada gaarka ah u leh in ay ciyaartoy da’yar ah soo barbaariyaan balse ay marka danbe lacago badan ka sameeyeen.
Ciyaartoy badan oo hadda ka ciyaarta horyaalada waa wayn ee Yurub iyo kuwo magc wayn ku soo yeeshay kubbada cagta ayaa ka soo qalin jabiyay akadamiyada kooxda Ajax.
Hakim Ziyech ayaa noqday xidigii ugu danbeeyay ee Ajax lacag badan kaga baxaya inkasta oo ay si sahlan markii hore ku heleen isla markaaana ay ka dhigeen xigga u uu maanta yahay.
Hakim Ziyech waxa uu ka mid noqday shanta ciyaartoy ee ugu qaalisan ee ay kooxda Ajax lacagaha wareerka ah ka samaysay iyada oo aan idiin soo bandhigi doono arin ay adag tahay in aad rumaysan karto.
Kooxda Ajax ayaa €19.8 milyan euro kaliya ka bixisay shanta ciyaartoy ee ay lacagaha ugu badan ku iibisay waxayna kala yihiin Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong,Davinson Sanchez, Hakim Ziyech iyo Arkadiusz Milik kuwaas oo dhamaantood isku dar ahaan Ajax ku taagnaa qiimo dhan 19.8 milyan yuro kaliya.
Laakiin kooxda Ajax waxay shantan ciyaartoy ee Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong,Davinson Sanchez, Hakim Ziyech iyo Arkadiusz Milik ku iibisay lacag dhan €264 milyan euros, waxaad qiyaasi kartaa farqiga faa’iidada ee labda tiro u dhexeeya.
Halkan kaga bogo shantan ciyaartoy iyo mid kastaba qiimihii ay Ajax ku iibisay ee ay faa’iidada waalida ah kaga samaysay.
Kooxaha Juventus, Barcelona, Tottenham, Napoli iyo Chelsea oo ugu danbaysay ayaa noqday shanta kooxood ee ay Ajax faa’iidada ugu wayn ka heshay.